Famoahana Tamin’ny Facebook: Iraniana Mpianatra Notazonina Tsy Misy Vesatra Fiampangàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Oktobra 2015 1:22 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, македонски, عربي, Swahili, Español, русский, English
Farah Bakhsh renin'i Amin Anvary, tao anaty hetsi-panoherana iray ho fanafahana an-janany. Sary avy amin'ny ICHRI.
Nosamborina ilay mpianatra sady mpikaroka mafàna fo, Amin Anvari, 21 taona, izay nahazo sazy mihantona tany am-piandohan'ity taona ity noho ny zavatra navoakany tao amin'ny Facebook ho fampiroboroboana ireo fahalalahana fototra ho an'ny sivily, ary notànan'ny Mpiambina ny Revolisiona ao amin'ny fonjan'i Ervin – Sampana 2-A na dia tsy misy vesatra iampangàna azy aza, nanomboka ny 4 Oktobra 2015. Araka ny lazain'ny fianakaviana, niharan'ny fanerena mafy izy mba hanaovany fibabohana heloka tsy nataony.
“Mandrahona sy misotasota anay ry zareo mba hanaovana tsindry amin'i Amin any am-ponja. Azoko antoka izany. Tian-dry zareo hanaiky hibaboka lainga izy,” hoy i Farah Bakhshi renin'i Amin Anvari tamin'ny ICHRI ( International Campaign for Human Rights in Iran.- Fanentanana Iraisampirenena Ho an'ny Zon'olombelona ao Iràna)
Voalohany voasambotra tamin'ny 30 Desambra 2014 i Amin Anvari, noho ny zavatra navoakany tao amin'ny Facebook ho fampiroboroboana ireo fahalalahana fototra momba ny zo sivily. Navoaka io andro io ihany izy rehefa tsy maintsy nandoa 300 tapitrisa-rial (eo amin'ny 10.000 dolara Amerikana). Ny Jolay 2015, notsaraina tao amin'ny Sampana faha-26 amin'ny Fitsarana Revolisionera Islamika notarihan'ilay mpitsara Ahmadzadeh izy, ary nohelohina roa taona sy tapany am-ponja noho ny “fampielezana hevitra manohitra ny fanjakana”, “faniratsiràna ny Mpitondra Faratampony,” ary “faniratsiràna an'i Mohammad Taghi Mesbagh Yazdi”, izay mpikambana ao amin'ny Filankevitry ny Manampahaizana. Saingy nahantona mandritry ny dimy taona ny saziny.
Nampahatsiahivin-dRamatoa Bakhshi fa lehilahy folo niditra an-keriny tao an-tranony no nisambotra ny zanany lahy, ny 4 Oktobra teo, tsy nampiseho izay amantarana azy na didy maniraka azy, ary nàka ireo solosainany manokana. Hatreo dia resaka an-telefaona in-telo sisa no mba azony atao amin-janany. Anaovana sotasota izy, ny vadiny ary ny zanany lahy kely indrindra ary nampitandremina tsy hanao antsafa mikasika ny fisamborana an'i Amin.
“Na inona na inona zavatra manjo ny zanako roa, ny tenako ary ny vadiko dia ny Mpiambina ny Revolisiona no tomponandraikitra. Mandrahona anay ry zareo ka nahatonga ahy tsy nanao hetsi-panoherana na nitafatafa. Saingy tsy manana safidy hafa aho. Tsy tianareo hanao antsafa aho ve? Amin'ny anaran'Andriamanitra, avotsory ny zanako dia hilamina aho.” hoy Ramatoa Bakhshi.
Nampitain-dRamatoa Bakhshi tamin'ilay Fanentanana ny fomba nanandraman'ny manampahefana iray ao amin'ny fonjan'i Evin nanao tsindry taminy tsy hiresaka amin'ny media :
Nilaza tamiko izy fa hamela ahy hijery an-janako raha toa aho manome toky fa tsy hiresaka amin'ny mpanao gazety na hirotsaka aminà hetsi-panoherana. Hoy aho hoe mety hanaiky aho raha manome toky izy fa hamotsotra an-janako. Tsia hoy izy, ary hoy aho hoe ‘izay izany, dia hotohizako izay zavatra efa ataoko.’
Nambaran'ny renin'i Amin Anvari fa nangina izy nandritry ny roa herinandro taorian'ny nisamborana ny zanany. Saingy ny 19 Oktobra, nanatevina ny hetsi-panoherna iray nokarakarain'ny fianakavian'ireo voafonja izy. “Tamin'izay andro izay indrindra no niantso an-telefaona tany an-tranonay i Amin ary nilaza hoe ‘Teneno i neny tsy hanao antsafa satria hiteraka olana izany [raha toa ka]’.”
Nolazain-dRamatoa Bakhshi nandritry ny fitsidihana isantaona tamin'ity taona ity any Tiorkia, fanaon'ny fianakaviana rehefa lohataona, fa hitan'izy ireo hoe nosamborina daholo ny naman'i Amin sasantsasany. Niteny taminy izy tsy hiverina any Iràna raha toa ka heveriny fa mety misy olana. Saingy nilaza ho tsy nanao ratsy izy ary naniry ny hiverina hanohy ny fianarany eny amin'ny anjerimanontolo, hoy Ramatoa Bakhshi nanampy.
“Ny teniko tamin'ireo manapahefan'ny fitsaràna dia tsy tokony hisambotra tanora sy hamoaka didim-pitsarana mavesatra ho azy ireny ry zareo isak'izay mitsikera izy ireny. Tokony hipetraka hianatra any an-dakilasy izao ny zanako lahy.”